Banyere Anyị - Huizhou Winmax Sport Co., Ltd.
Dị ka onye na -ebubata ngwaahịa na China na bọọdụ mbadamba na tebụl egwuregwu, anyị na -etinye onwe anyị n'ịnweta azịza otu nkwụsị maka mkpa gị niile na mkpa egwuregwu.
WIN.MAX na -anọchi anya 'Ihe niile maka egwuregwu' ma na -agba mbọ mgbe niile imepụta ihe ọhụrụ, na -enwe oke ngwaahịa na -ekpuchi ụdị egwuregwu na egwuregwu dị iche iche.
Dị ka onye na -ebubata ngwaahịa na China na bọọdụ mbadamba na tebụl egwuregwu, anyị na -etinye onwe anyị n'ịnweta azịza otu nkwụsị maka mkpa gị niile na mkpa egwuregwu. Anyị na -ebu tebụl ọdọ mmiri, tebụl foosball, tebụl tennis tebụl, tebụl hockey, dartboards, elektrọnik dartboards, ngwa dart na ihe ndị ọzọ na China. Anyị na -elekọta ụmụaka na ndị okenye.
Ọ bụghị naanị na anyị setịpụrụ ụkpụrụ ụlọ ọrụ maka ịdị mma kamakwa ọgbara ọhụrụ. Anyị na -agbasawanye Pọtụfoliyo ngwaahịa anyị iji gboo mkpa ndị ahịa anyị na -achọ.
Egwuregwu WIN.MAX na-erere ndị ahịa ya ngwaahịa ya ozugbo site na ụlọ ahịa ika, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, na azụmahịa e-commerce yana site na ndị ahịa azụmaahịa n'agbụ ngwongwo egwuregwu, ndị na-ere ahịa ọpụrụiche, ndị na-ere ahịa buru ibu, klọb ahụike na ndị nkesa. N'ọnwa Disemba 2020, nzukọ ire ere nke WIN.MAX nwere kpuchiri mba iri abụọ.
Ogo ụlọ ọrụ Mfe 5,000-10,000
Obodo/Mpaghara Ụlọ ọrụ Ala 2, Nke 6 Ụlọ, Nke 49, Zhongkai 2nd Road, Huizhou City, Guangdong Province, China
Emere Afọ 2013
Ụdị azụmahịa Onye nrụpụta, ụlọ ọrụ azụmaahịa
Mba nke Usoro Mmepụta 3
Nlụpụta nkwekọrịta A na -enye ọrụ OEM
Uru mmepụta kwa afọ US $ 5 Nde - US $ 10 Nde
R & D ikike Enwere/dị ihe na -erughị mmadụ 5 R&D Injinia (s) na ụlọ ọrụ.
Ndị otu anyị nwere ndị ọrụ nwere ahụmịhe n'ahịa a, n'ụdị azụmaahịa yiri nke ahụ n'ime afọ iri gara aga. Ndị otu anyị nke ndị na -ere ahịa nwere ihe ọmụma banyere ahịa nke mbụ ma na -ejigide mmekọrịta dị mma n'etiti ndị ahịa.
Anyị nọ na ebumnuche inyere onye nkesa aka ịkwalite azụmahịa ha wee nweta uru asọmpi na nkwado ngwaahịa anyị.
Anyị bụ ụlọ ọrụ ngwongwo egwuregwu. Anyị bụ WIN.MAX.
WINMAX bụ akara a na -elekwasị anya n'inye ụwa ngwongwo egwuregwu ezumike dị mma dị elu.
Onye na -ebubata kọntaktị